Erciyes, Uru nke ụwa - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region38 KayseriErciyes, Uru nke ụwa
Erciyes, Uru nke ụwa
erciyes uru nke ụwa
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç nwere nzukọ dị mkpa na Erciyes. Onye isi ala Büyükkılıç zutere ndị na-etinye ego na Erciyes, ala ekenyela ndị na-etinye ego ngwa ngwa o kwere mee iji mee ka akụrụngwa chọrọ. Onye isi obodo Büyükkılıç kwuru na Erciyes bụ uru ọ bụghị naanị nke obodo anyị, kamakwa ụwa, nakwa na ha na-agba mbọ igosipụta uru a maka ọrụ mmadụ n'ụzọ kachasị mma.
Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç nwere ndị ya na ndị na-etinye ego ka ha nwee nzukọ iji tinye ego ha na 7 parcel kenyere 24 afọ gara aga. Mayor Büyükkılıç weere echiche nke ndị niile na - etinye ego na nzukọ ahụ.
“ERCİYES B AN ỌRRE dị mkpa”
Mgbe echiche nke ndị investors, Erciyes A.Ş. Onye isi oche nke Board Murat Cahid Cıngı, Erciyes bụ akụ kachasị mkpa nke obodo a, o kwuru. Erciyes bụ uru dị na ya; Agbanyeghị, Cıngı kwusiri ike na Onye isi oche Memduh Büyükkılıç rụrụ ọrụ ndị dị mkpa maka ngwaahịa ndị ọzọ ga-akwado Erciyes na Kayseri wee kwuo, ız Onye isi ala anyị na-arụ nnukwu ọrụ iji gosipụta atụmatụ njem niile dị n'obodo ahụ maka abamuru nke ọha. Ndagwurugwu Koramaz, Waterfall Kapuzbaşı, ụkpụrụ H Villarmetçi Village dị ka Erciyes na-agba mbọ ijikọ njem. N'afọ gara aga, ụgbọ elu ahụ erutere Erciyes kwa izu site na mba 3. N'afọ a, 4-5'e ga-adị. Mmepe ndị a pụtara ụgbọelu 10 mgbe afọ 30 gasịrị. Ugboro atọ ọnụ ọgụgụ ndị njem na-abịa n'ụgbọ elu Charter si na Istanbul. Ugbu a, Erciyes na-ahụ maka akara Russia na Ukraine. ”
D Achọrọ m ịmalite ngwa ahịa ”
Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç kelere ndị niile na - etinye ego nke sonyere na ntule nke nzukọ ahụ. Onye isi obodo Büyükkılıç kwuru na ha natara atụmanya nke ndị na - etinye ego ma zaghachi akara ajuju ha n’isi ma kwuo na ha nwere nzukọ dị mma. N’imesi ike na Erciyes bụ uru ọ bụghị naanị nke Kayseri na obodo anyị, kamakwa ụwa, Onye isi ala Memduh Büyükkılıç kwuru, de Anyị na-agba mbọ dị mkpa iji gosipụta uru a n'ụzọ kacha mma. Anyị ga-agba mbọ ibubata Erciyes na ọ bụghị naanị dị ka njem nlegharị anya sọọsọ kamakwa maka njem nlegharị n'oge ọkọchị. Anyị ahụla na a na-agba ndị na-etinye ego ume ka ha malite ịmalite ihe owuwu ma gosipụta uche ịmalite ịmalite itinye ego. Anyị ga-eme nke anyị, ”ka o kwuru.
Uru Erriyes Kayseri Buru Uru nke Ụwa 03 / 08 / 2017 A kọwapụtara ndị na-ebipụta akwụkwọ na Kayseri Metropolitan Municipality na Erciyes. Akwụkwọ nke atọ nke ọrụ otu mpaghara nke Metropolitan Municipality nọ na Erciyes kwa izu. Ná nzukọ ahụ, nkwụnye ego na njedebe metụtara Erciyes, bụ nke ghọrọ otu n'ime ebe ndị dị mkpa na ski na ụwa na itinye ego nke Metropolitan Municipality, na-ekere òkè na ndị nta akụkọ na ọha mmadụ. Mayor Mustafa Celik, Erciyes kwuru na ha na-arụ ọrụ iji wetara obodo ahụ uru. Nzuko nke Kayseri Erciyes A.Ş. bu n'ime obodo Metropolitan nwere na Erciyes. N'ikwu okwu n'ọmụmụ ihe, Mayor Mustafa Çelik kwuru na ntinye ego nke Metropolitan Municipality na Erciyes nwere akụkọ ntolite na-amalite na 2005.
TÜDEMSAŞ, Turkey dị mkpa 24 / 02 / 2017 TÜDEMSAŞ, Mba dị mkpa nke mba anyị: Mehmet Nebi Kaya, odeakwụkwọ ukwu nke Sivas Special Provincial Administration na Sedat Özata, onyeisi oche nke Assembly Assembly nke Sivas, gara TÜDEMSAŞ. TUDEMSAS General Manager Yildiray Kocarslan, Mehmet Nebi Kaya na Sedat Ozata nyere nkọwa gbasara ọrụ na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. N'ịbụ ndị Kaya na Özata General Manager Yıldıray Koçarslan na-enweta, ha nwere ohere ịga ụlọ ọrụ Ụlọ Ọrụ na Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ nke Ụlọ ọrụ, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọkụ, na Ngalaba Laboratories Na-achịkwa na Ngalaba ihe onwunwe iji hụ ọrụ na saịtị. Nebi Kaya, odeakwụkwọ ukwu nke nchịkwa nke ógbè pụrụ iche, Demirağ 2 n'okpuru nchịkwa nke Gọvanọ Davut Gül na nzukọ nke TUDEMSAŞ General Directorate. Hazie ...
Ebu ahia Bursa na-ebili n'ahịa ụwa 26 / 09 / 2016 Bursan's brand value is rising in the markets world: Bursa Mayor Recep Altepe gara ụlọ ọrụ ndị na-ekere òkè n'ahịa azụmahịa na ndị na-azụ ahịa na ụlọ ahịa na İnnotrans 2016 na Germany. Bursa Mayor Recep Altepe gara ụlọ ọrụ ndị na-ekere òkè n'ahịa azụmahịa na ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na İnnotrans 2016 nọ na Germany. Ndị ụlọ ọrụ Turkey kwusiri ike na 2016 İnnotrans, bụ ebe a na-emepụta ihe ọhụrụ na okporo ụzọ okporo ụzọ, okporo ụzọ, tunnels na nkà na ụzụ n'ime afọ abụọ na Berlin, Germany. The mma, nke Turkey sonyeere 80 nso ụlọ ọrụ nchọgharị Bursa Mayor Recep Altepe, Bursa 40 nke ụlọ ọrụ na-anọchi n'etiti ụlọ ọrụ ndị ahụ ...
Nnukwu ọrụ weghaara akụkụ Europe! Ọnụ ahịa ụlọ ndị dị na mpaghara ahụ abawanyela okpukpu abụọ 12 / 10 / 2016 Ọrụ ndị buru ibu meghachiri n'akụkụ Europe! Uru ụlọ ndị dị na mpaghara ahụ abawanyela okpukpu abụọ: ihe mega ndị e mepụtara na Istanbul emetụtawokwa ụlọ ndị ahụ. Ọrụ nnukwu na-emewanye ọnụ ahịa nke ezigbo ụlọ na mpaghara ụfọdụ. A na-enyocha ezigbo ụlọ ndị dị na mpaghara ndị a dị ka ụlọ 5. ọdụ ụgbọ elu, Marmaray, 3. N'ógbè ụfọdụ nke Istanbul, ọnụ ahịa ụlọ ejiriwo okpukpu abụọ, North Marmara Motorway na metro investments. Sefaköy-Halkalı- Güneş Ekspress Road, otu onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ na mgbasa ozi, na-enwe ụdị ọhụrụ ya na ụlọ ya, ọfịs, ụlọ nkwari akụ na ụlọ ahịa ụlọ ahịa. Sefaköy nke jikọrọ Atatürk Airport, E-5, TEM na okporo ụzọ n'ụsọ oké osimiri Halkalı - Osisi na-acha ọkụ, ...
Efe Erciyes Na-enwe obi ụtọ na Erciyes Ski Center 08 / 01 / 2017 Erciyes Ski Center Erciyes Cup ụtọ Erciyes Ski Center, na-eme Erciyes Cup ụsụụ ndị agha ga-asọrịta mpi mba na mba skiers ... Turkey ji mma oru-esi nwere skai center na ụsụụ ndị agha ọtụtụ mba tournaments Erciyes Ski Center, na 07-08 January 2017 ụbọchị Ka a na-eme ndokwa ịgba agba agba Erciyes, a ga-akwado ọtụtụ ndị si mba ọzọ na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri. The nwoke na nwaanyị ige, Luxembourg, Turkey, Pakistan, na na-na mba ndị dị ka Albania, gụnyere òkè nke ọkachamara skiers na xnumx'n hụrụ Erciyes Cup, ga-ẹkenịmde ke Erciyes Ski Center njem ala nsọ ụzọ track. N'ebe a na-eme obi ụtọ ebe ndị egwuregwu ga-enwe nnukwu agbụrụ
Ụlọ ọrụ ski Centre Erciyes bụ ebe kachasị mma na ụwa 13 / 02 / 2015 Erciyes Ski Center Aghọọ Ụwa Kasị ala Place: The ụwa exporting mba n'elu bed na xnumx't BRN akwa, ugbu a na-enye ndị nche nke kızakçı na Erciyes Ski Center. BRN B nke 'Ụwa Kasị ala Ebe' slogan maka ọ bụla mkpa na-achọ akwa, ọkara afọ ezumike na 60 puku ndị mmadụ, e odude na firewall na Erciyes Ski Center n'etiti ndị fọdụrụ n'ezinụlọ runways na ụwa ile ọbịa nke ọma. 500 100 BRN mita imecha ebe na bed enịm ke toboggan-agba ọsọ, na-eme ka ha karịsịa kızakçı obere ileghara n'enweghị nsogbu. BRN Bearings na-echeta na ọ bụ ụlọ ọrụ nke na-eme ka ọ dị mkpa ịrụ ọrụ nchekwa na ahụike n'oge mmepụta güvenli
Ejiri Erciyes mee ihe n'ikike kacha mma nke njem nleta 13 / 03 / 2017 Erciyes ụwa nnukwu Tourism Webatara na ndị ngosi: na Erciyes na Kayseri Metropolitan Municipality nke ego, nke na-otu n'ime ụwa si eduga oyi njem emmepe, ndị kasị ibu n'ụwa njem ahia ngosi, na ITB Berlin International Tourism Fair ẹkenam. Metropolitan Municipality nke ego na-otu n'ime ụwa si eduga oyi njem emmepe Erciyes, ndị kasị ibu n'ụwa njem ahia ngosi, na ITB Berlin International Tourism Fair ẹkenam. Ihe eji eme njem nleta ngosi nke International International Berlin nke 8-12, bu otu n'ime ihe ndi njem ndi ozo kachasi n'ime uwa, na Berlin, Germany n'etiti March na March. 184 bụ otu n'ime ụlọ nzukọ kachasị mma nke ụlọ ọrụ njem na ụwa.
Erciyes bụ nnukwu ski resotu 15 / 03 / 2014 Erciyes bụ nnukwu ski skip: Nkọwa 25 nke njem njem oyi na ụwa, ebe kachasị mkpa njem nlegharị anya oyi nke ụwa dị n'Austria, ndị nwe obodo ndị ski na ndị isi ọrụ bịara Kayseri ịhụ Erciyes. Erciyes kwuru na ụlọ ọrụ ntụrụndụ oyi na-emetụ ha n'ahụ nke ọma na Erciyes kwuru na ọ ga-abụ nnukwu ebe izu mmiri n'ime afọ ole na ole. Erciyes, ma skiing na gondola na-aga n'ọdụ ụgbọ elu ndị dị nso na nzuko ahụ ma na-enyocha ụzọ ụgbọ njem ndị ọchụnta ego Austrian nwere mmasị na Erciyes'e. Kayseri Erciyes A.Ş. Onye isi njikwa Yücel İkiler gosiri 10 ndị na-ahụ maka ebe a na-eme ski resorts na ụlọ ọrụ Erciyes gez
Erciyes 'n'elu obodo buru ibu, Kayseri dị njikere maka ya 17 / 03 / 2014 A na-ewu nnukwu obodo n'elu Erciyes, Kayseri dị njikere maka nke a: mı Ị bịara Kayseri n'ụbọchị oyi nke afọ. N'etiti ehihie a siri ike oyi. Ana m ele Erciyes anya, ọ dị mma, ọ doro anya na snowing. Kayseri Erciyes AS Onye isi oche nke Board na General Manager M zutere Murat Cahit Cıngı na KAYSO n'abalị ha kwadoro ndị na-agba ụgbọ mmiri Denmark iji kwalite ụlọ ọrụ ha na Erciyes. Anyị enweghị ike ịga n'ugwu ahụ site na njigide, anyị bịanyere aka na nleta ọzọ. İPZ Anatolia maka ogbako Kayseri otu ụbọchị tupu ha agaa n'obodo na-ege nti ụdị snow. Emere m nkwa m kwere na Cıngı. Ịhụ ego e tinyere Erciyes, aha obodo Kayseri na obodo mmepụta ihe yana Erc
Oge mbụ na Turkey, Snow Volleyball ndorondoro na Erciyes 13 / 02 / 2017 Oge mbụ na Turkey, Snow Volleyball na Erciyes ndorondoro: 2017 CEVA Snow Volleyball European Cup, 18-19 February ga-ẹkenịmde maka oge mbụ Erciyes na Turkey ... Kayseri Metropolitan N'ihi nke Municipality nke isi investments, na ụwa-otu ụlọ ọrụ na runways Ụlọ ọrụ ski Center nke Erciyes, nke ghọrọ Kış Universal Winter Sports Center ", na-aga n'ihu ịkwado mmemme egwuregwu mba na nke mba. The signatories ụwa nke mbụ na ọnọdụ na-oyi egwuregwu site na-eweta Turkey Erciyes Ski Center, na February 18 19 2017-ụbọchị, na nyochaa nke na-adịbeghị anya "Snow Volleyball" ndorondoro na-kwadoro. 2017 CEV Snow volley European Cup 1.turn, nke ga-abụ ihe nkiri nke mgba nke ndị na-eme egwuregwu na mba ụwa, bụ nke mbụ ...
Uru Erriyes Kayseri Buru Uru nke Ụwa
TÜDEMSAŞ, Turkey dị mkpa
Ebu ahia Bursa na-ebili n'ahịa ụwa
Ụlọ ọrụ ski Centre Erciyes bụ ebe kachasị mma na ụwa
Ejiri Erciyes mee ihe n'ikike kacha mma nke njem nleta
Erciyes bụ nnukwu ski resotu
Erciyes 'n'elu obodo buru ibu, Kayseri dị njikere maka ya
Oge mbụ na Turkey, Snow Volleyball ndorondoro na Erciyes